Ahoana ny fomba hanamaivanana ny nifin'ny sary amin'ny Photoshop | Famoronana an-tserasera
Ahoana ny fomba fanamaivanana ny nify amin'ny sary Photoshop dia zavatra tena mora atao amin'ity programa ity retouching sary matihanina, ho azo antoka fa ny tsiky rehetra alainay sary dnify mamirapiratra toy ny voahangy. Mba nanontany tena ve ianao hoe maninona ny tsiky rehetra ao amin'ny magazine no manana nify fotsy sy madio? ny valiny dia Photoshop.
Afaka minitra vitsy dia hahazo ianao manazava ny tsiky amin'ny fampiasana teknika fanarenana nomerika matihanina izany dia hahatonga ny tetikasanay sary hanana vokatra tsara kokoa. Ity teknika famerenana ity dia afaka manompo anay amin'ny karazan-java-drehetra araky ny filantsika, tsy hianatra hanamaivana nify fotsiny ianao fa koa mamorona fifantenana marina ary miara-miasa amin'ny sasany fitaovana ahoana ny matihanina.
Mahazoa tsiky mahafinaritra zavatra mora be izany noho ny fanampian'ny Photoshop ary ny fahafahany tsy manam-petra eo amin'ny tontolon'ny sary retouching. Amin'ny fampiasana fitaovana sasantsasany dia hahafahantsika manamaivana ny nifin'ireo tsikitsika izay nalaintsika sary tamin'ny fotoana nifehezantsika azy teknika asa matihanina.
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika amin'ity retouch ity dia sary iray izay ahitanao tsiky. Raha vantany vao manana ny sary isika, ny zavatra manaraka hataontsika dia mamorona fifantina nify, noho izany dia afaka mampiasa karazana fitaovana fifantina isika Photoshop. Azontsika ampiasaina ny fitaovana fantsom-by manaova fisafidianana marina tsara momba an'io karazana asa io na fampiasana a sarontava haingana.
Aorian'ny fanaovana ny fifantenana dia ny zavatra manaraka tokony hataontsika dia mamorona sosona fanitsiana haavon'ny, ity safidy ity dia hamela antsika manamaivana ny nify eo amin'ny sary. Izahay dia mamindra ny fampianarana arakaraka izay ilainay ary mampihatra ny fanovana arakaraka ny vokatra tadiavinay.
Rehefa vita ny retouch ny zavatra farany tokony hataontsika dia ny manala azy kely ka ny fiovana eo amin'ny sisin'ny nify sy ny sisa amin'ny sary dia tsy dia tsikaritra loatra. Ny fanalefahana ny famerenana indray izay tokony hataontsika dia asio blur eo amin'ny sehatra fanitsiana haavon'ny.
Misaotra ny fanampian'ny Photoshop afaka nataontsika mahazo tsiky amin'ny fomba lamaody magazine. Tsy manana fialantsiny intsony ianao, ny tsiky rehetra manaraka izay ataonao tsy mety maty amin'ny fakantsarinao dia mety hitsiky toy ny oram-panala.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Photoshop » Ahoana ny fomba hanamaivanana ny nifin-tsary amin'ny Photoshop
Ataovy manintona kokoa ny datao amin'ireto fampiharana an-tserasera 5 ireto hamoronana sary